Mitambo yeLinux - Linux Vakapindwa muropa | Linux Vakapindwa muropa (Peji 3)
Dzidziso diki yekutamba Nyoka mune yedu Gnu / Linux Terminal. Mutambo wekare watakave nawo mazhinji kuburikidza nhare dzeNokia ...
Nyika yemitambo yemavhidhiyo hairegi kutishamisa nemazita ayo matsva, chikamu chemifananidzo, uye madingindira. Bum Simulator ndeimwe yemazita aya anonyatso kubuda pamusoro wenyaya yacho ...
Mission Yakakosha inowanikwa kuGOG neLinux vhezheni
Mission Inokosha, zita rinonakidza iro rave kuwanikwa kune vanoda rudzi urwu rwevhidhiyo mutambo mune yeGOG online chitoro ine vhezheni yeLinux
HIVE: Altenum Hondo Dzinoburitswa uye Kuuya kweLinux
Mutambo wevhidhiyo HIVE: Hondo dzeAltenum dzasvika, uye pachavewo nenhau dzakanaka kuvashandisi veGNU / Linux, nekuti ichazosvikawo ino sisitimu.
League of Legends inozivikanwa zvakare nechidimbu chayo LoL ndeye inokurumidza-kukwikwidza, inokwikwidza, yakawanda multiplayer online kurwa nhandare (MOBA) uye yemagetsi mutambo wevhidhiyo mutambo unobatanidza kumhanya uye kusimba kweiyo RTS ine RPG zvinhu zvakagadzirwa neRiot Games yeMicrosoft Windows uye OS X.
Paradox yakazivisa zita rekuti Stellaris: Nyeredzi Dziri Kure, mutambo wevhidhiyo wakagadziridzwa nekuvandudza kunonakidza uye nyaya nyowani dziri kuuya kuGNU / Linux futi.
Shadow Tactics: Blades yeShogun ndeye-chaiyo-nguva nzira vhidhiyo mutambo iwe waunogona kuwana muchitoro ...
Worms WMD, imwe yemhando dzeiyo ngano vhidhiyo mutambo weguerrilla honye, ​​ikozvino ine yekupedzisira chigamba chiripo icho ...
Civilization VI iri kuuya kuGnu / Linux uye iyo Steam chikuva. Izvi zvasimbiswa nekambani ine yavo vhidhiyo mutambo, Aspyr Media ...
Yekupedzisira Edition 5.0 iri kunze
Kana mumwe munhu asingazvizive, Yekupedzisira Edition iri kugovera kunoenderana neUbuntu uye yakanyatsogadzirirwa mitambo yemavhidhiyo, iri ...
Kudzokorora kwemitambo muLinux yegore rino 2016
Isu tanga tichizivisa kwemakore mashoma kana matatu kuvandudza kukuru kwakaitwa neLinux chikuva ...
Grid Autosport: mutambo wevhidhiyo unouyawo kuLinux
Zvita 10, 2016, ndiro zuva rakatemwa nevagadziri veGidhi Autosport mutambo wevhidhiyo kuitira kuti zita iri ...
Lara Croft Go anouya kuLinux nekuda kweSteam
Kuwanikwa kweiyo nyowani Lara Croft Go vhidhiyo mutambo wachangobva kuziviswa pane Steam, iyo inowanikwa yeLinux, Windows uye macOS.
Maitiro ekuisa Minecraft paLinux
Minecraft, kuda kwevanhu. Pano tinokuratidza mashoma matanho akakosha kuti iwe uise paLinux.
Ultimate General: Yenyika Hondo uye Kuuraya pasi 2 rova ​​iyo Linux nyika
Musoro uye mhando yeizvi zveGNU / Linux zvinoramba zvichikura. Chitoro cheValve, Steam, inoramba ichiwedzera runyorwa ...
Yakazara Hondo: WARHAMMER Zvino Inowanikwa yeLinux
Nhasi, Yakazara Hondo: WARHAMMER yeLinux neMac dzakabva dzawanikwa kumitambo.
WinKings ikozvino inowanikwa pane iyo Steam chitoro
WinKings yave kuwanikwa kurodha pasi kubva kune inozivikanwa Valve chitoro, Steam. Ichi chakanyanya ...
Arma 3: basa rinoenderera kuLinux vhezheni
Arma 3 mutambo wevhidhiyo waunogona kuwana parizvino kune mamwe mapuratifomu muchitoro cheValve, Steam. Nehurombo kwete…
Iwe uchatoziva nezve kuvhurwa kwemutambo wevhidhiyo Dhiragoni Bhora Xenoverse 2, iyi nyowani vhezheni yeiyo ngano vhidhiyo mutambo uyo unofambisa imwe ye ...
Chekutanga pane zvese, tsanangura chinonzi Gameplay kana usiri kuziva. Kunyangwe kana iwe uchitsvaga iyo tsananguro mune ...
Nongedzo diki yekuisa Pokémon Go Mepu pane yedu Gnu / Linux uye uine mepu yakagadziridzwa pamwe ne pokémon inoonekwa padyo nesu ...
Isu tese takanyudzwa munguva yevaraidzo yedhijitari umo makambani anoedza kuburitsa mitambo yemavhidhiyo ...
Nhema Mesa, ndeye remake yeakakurumbira vhidhiyo mutambo Hafu-Hupenyu kubva kuValve, inouya iri muchimiro che mod yeHalf-Hupenyu 2 ye ...
Makumi mana akanakisa emitambo yeLinux ya40
Isu tinopinda mumisoro yakaoma, nekuti inyaya yekuravira uye vamwe vangangoda mamwe mazita e ...
Hardware kambani Entroware yazivisa kuwanikwa kwaAthena, imwe yemitambo yekutanga yemitambo ine Ubuntu pre-yakaiswa ...
Windows 10 inokwira kumusoro, GNU / Linux inodonha paStam
Nehurombo kwete dzese nhau dzakanaka kune vashandisi veLinux, panguva ino isu tinofanirwa kuziva izvo Microsoft Windows 10 ...
Manjaro Linux Gaming 16.06: iyo Arch Linux yevatambi
Manjaro Linux kugoverwa kunoenderana neinozivikanwa Arch Linux sezvaunofanirwa kuziva kare. Zvakanaka, pane iyo ...
Speed ​​Dreams imitambo yemoto uye racing racing iyo inowanikwa kune akasiyana masisitimu anoshanda, akadai seWindows ...
Lakka iri kugoverwa kweLinux iyo iwe yawakanyatsonzwa nezvayo (isu tatozviita pano) nezvazvo….
Kutiza kubva kuTarkov ndeye anovimbisa shooter mutambo wevhidhiyo uyo unowanikwa kuLinux uye watosvika padanho reAlfa nhanho yekusimudzira.
Sekutaura kwemusoro wevhidhiyo, Rima Rakasviba Mutorongo mutambo mukuru uripo kune mamwe mapuratifomu akadai sePlayStation 4, ...
Balrum, yakanaka 2D RPG yeLinux
Balrum ndeye 2D RPG yaunogona kuzvivaraidza nayo mukugovera kwako kweLinux. Chekutanga pane zvese, tsanangura kuti chii ...
Steam Machine: zvese nezveValve's mutambo koni
STEAM MACHINE zvakakwana !!! Tsvaga ayo ese manomano uye zvakavanzika
Kudzidza uchitamba chimwe chinhu chinonakidza padanho redzidziso revana, asi zvakare vazhinji vasina kunyanya ...
Openage: yakavhurika sosi dombo yeiyo Age YeEmpires II injini yeLinux
Openage chirongwa chakagadzirwa nevanozvipira uye chisiri purofiti, chiri chemahara uye chemahara. Ivo chaizvo vanoedza kugadzira ...
Iyo giraidhi kambani Nvidia yakaburitsa gadziriso yemadhiraivha ayo azvino eese maLinux neWindows, ayo anomira kunze
Raira uto revarwi vekutambisa epurasitiki mune yakajeka nyika umo hondo dzinovaraidza dzicharwa neThe Mean Greens Plastic Warfare.
Gnu Chess injini ye chess inodzokorora mutambo wemunhu uye yatinogona kushandisa semupikisi kutamba inonakidza Chess mitambo.
Tinokupa iwe gwara rakazara rekuunganidza rako rakagadzirwa Steam Machine ine yakapusa uye nhanho-nhanho-nhanho tsananguro. Yako yekutandarira nzvimbo yekutandarira.
Iyo mitambo mishanu yakatambwa zvakanyanya paSteam inotambika paLinux
Vanhu veValve vakaburitsa mamwe manhamba nezve Steam, imwe yehuwandu hwavakaburitsa ndiyo mitambo inotambwa zvakanyanya pachikuva chavo.
Nongedzo: kuvaka yako yakajairwa Linux-yakavakirwa Gamer PC
Isu tinokupa iwe kiyi dzekumisikidza nekuvaka iyo yakanakisa Gamer PC yako, zvinoenderana nezvaunoda uye nemutengo waunoda kushandisa. Ehezve neLinux.
Yekupedzisira Edition 4.6 Gamers ndeye Linux distro yevatambi. NaWine, PlayOnLinux yeWindows uye Steam mitambo. Inosanganisirawo XBMC uye zvimwe zvekuvandudza.
Kubatana mutambo injini yave iine kuvaka kweLinux
Icho chiitiko chekuyedza Kubatana kuvaka, icho chinopa mashandiro akanaka kwazvo uye mukana wekutumira kune mamwe maratidziro.
ARK: Kupona Kwakashanduka muna Chikumi 25
ARK: Kupona Kwakashanduka mutambo wevhidhiyo wekupona mune dinosaur nyika iri kunakidzwa nekubudirira kukuru paValve's Steam chitoro.
Kufa Chiedza kunotova nechigamba
Kufa Chiedza mutambo wakanaka wevhidhiyo unowanikwawo neLinux, asi yaunza mamwe matambudziko ekuita uye zviputi zvinozonamirwa.
Hondo Yekutinhira: Zvino Inowanikwa yeLinux
Hondo Kutinhira ndeyemuchadenga uye yepasi kurwa kurwa mutambo une zvakafanana neWorld of Matangi Kubva ikozvino zvichienda zvichave zvakare kuwanikwa paLinux.
Civilization V inowanikwa natively yeLinux pane iyo Steam chitoro iwe chaunogona kutenga. Ndiwo mumwe wemitambo yakanakisa yeLinux, pasina mubvunzo
GamePlay Nhabvu ndiyo brainchild yeZvakakodzera Yakanaka. Uyu mutambo wenhabvu wePC iri Linux yakagadzirira. Iyo itsva vhezheni ndeye Ruzhinji Beta Kuburitswa 08.
PPSSPP ndeye yakavhurwa sosi uye multiplatform chirongwa icho chinokutendera iwe kutevedzera iyo Sony PSP koni kumhanya yako mitambo paPC uye mamwe mapuratifomu.
GNOME VIdeo Arcade (GVA) iri pamberi peiyo nyowani yeMAME emulator. Iye zvino unogona kudzokera kunotamba mitambo yemavhidhiyo yeLinux. Rangarira nguva dzekare
Euro Rori Simulator 2 inouya kuLinux
Imwe yemitambo inoshamisa uye inoshamisa yeLinux yatinogona kuwana ndeyeEuro Truck Simulator 2. Unogona ikozvino kurodha pasi mune yayo yemahara vhezheni.
openRA, iyo Command & Kunda kweLinux
OpenRA ndeye yemahara uye yemahara-chaiyo nguva mutambo mutambo, uri padhuze nemitambo senge "Raira & Mukunde".
Ini ndinogara ndichivaudza kuti ndinonyatsoda kutamba Monopoly, mutambo unonakidza kwazvo wekupedza husiku hwese uchirasikirwa ...